Library - The Word Foundation • Ny asa nataon'i Harold W. Percival
Ny Word Foundation Library
Ity tranomboky virtoaly ity no ahitàna ny boky Harold W. Percival sy ny sanganasa hafa rehetra azo jerena. Ny editorial dia nosoratan'Andriamatoa Percival ho an'ny magazain'izy ireo isam-bolana, The Word, izay navoaka teo anelanelan'ny 1904 sy 1917. Ny Teny dia nahitana endrika Q & A, "Moments with Friends," izay Andriamatoa Percival no namaly ny fanontanian'ireo mpamaky azy. Ny fandikana ny Fampidirana ny fisainana sy ny lahatra ary ny horonan-tsary momba ny Thinking and Destiny sy ny mpanoratra dia tafiditra ao koa.
Boky nataon'i Harold W. Percival
Fisainana sy faniriana, Lehilahy sy Vehivavy ary Ankizy, Ny demokrasia dia fitondram-panjakana ary Akora ary famantarana azo alaina amin'ny endrika elektronika ihany koa avy aminay Pejy pejy.
Nohazavin'ny olona maro ho boky tena feno izay nosoratan'i Man, ny Universe sy ny any ivelany, ity boky ity dia manambara mazava ny tena tanjon'ny fiainana ho an'ny olombelona rehetra.
Ity boky ity dia manaraka ny fivoaran'ny zaza ho fanadihadiana mahatsikaiky azy na ny tenany. Manasongadina ihany koa ireo anjara asa manan-danja ananan'ny ray aman-dreny amin'ny fikarakarana izany fahatsapana izany.
Mr. Percival dia manome ny hevitry ny demokrasia "True" tany am-boalohany. Ao anatin'ity boky ity, ny raharaham-barotra sy ny raharaham-pirenena dia raisina eo ambany fanehoana ireo fahamarinana mandrakizay.
Akora ary famantarana dia manazava fahazavana vaovao eo amin'ny marika, famantarana, fitaovana, mari-pamantarana ary fampianarana. Noho izany dia naseho ireo tanjona ambony nasehon'ny mason-kery.
Editorial isam-bolana avy amin'ny THE WORD
1904–1917 Fizarana I sy Fizarana II
Ny tonian-dahatsoratra nataon'i Harold W. Percival ao amin'ny Fizarana I sy II amin'ny andiany telo dia navoaka voalohany tao amin'ny The Teny gazety teo anelanelan’ny Oktobra 1904 sy Septambra 1917.
Fotoam-bavaka miaraka amin'ny namana
Avy amin'ny THE WORD 1906–1916
Ireo fanontaniana ao amin'ity boky fahatelo amin'ny andiany telo ity dia napetraky ny mpamaky ny The Teny ary namaly an'Ingahy Percival.